မြန်မာ ဓါတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်များ စုဝေးရာ
ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ပြနိုင်ယုံတင် မကပဲ၊ အင်တာနက်မှာ ဓါတ်ပုံတင်တဲ့အခါ အရည်အသွေး ကောင်းကောင်းနဲ့ ဘယ်လို တင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ တခြား ဓါတ်ပုံပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကိုိ လေ့လာနိုင်တဲ့ ဘလော့တခုအကြောင်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့မှာ အီဘိုလာရောဂါ ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတယောက် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာ တကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မိသားစုက သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် ….
နယူးယောက်မြို့မှာ အီဘိုလာရောဂါ ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတယောက် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာ တကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မိသားစုက သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် …. ထိပ်တန်းသတင်းများ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် ၂၀၁၅ မှာ WHO Ebola ဆေး သိန်းချီ ထုတ်မည် ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ သတင်းထောက် ပါကြီးကို အသေ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း စစ်တပ် ထုတ်ပြန် ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ အင်ဒို သမ္မတသစ်ရဲ့ သမီး အခွင့်ထူးခံဖို့ ငြင်းပယ် သတင်းထောက် ပါကြီးကို အသေ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း စစ်တပ် ထုတ်ပြန် ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti နေ့စဉ်သတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄) VOA60 USA ထူးခြားဆန်းပြား VOA60 USA